राजनीतिमा चलाख खेलाडी ! गगनले छोडेपछि सिटौलाको बिचल्ली «
राजनीतिमा चलाख खेलाडी ! गगनले छोडेपछि सिटौलाको बिचल्ली
प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०७६, शनिबार ००:२८
गगन थापाले छोड्ने भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको बिचल्ली हुने भएको छ ।महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा कुन समूहबाट को–को उम्मेदवारी बन्ने भन्ने अड्कलबाजी हुन थालेको छ । गत महाधिवेशनमा सिटौलासँग महामन्त्री उठेर हारेका थापा अब पनि हार्ने गरी उम्मेदवार बन्ने पक्षमा छैनन् । सभापति उठिसकेका हुनाले सिटौला फेरि पनि सभापति नै उठ्ने कि नउठ्ने भन्नेमा अन्यौलमा छन् ।
आफ्नो सानो झुण्ड बनाएर पार्टी सभापतिसँग ‘वार्गेनिङ’ गर्न सिटौला माहिर छन् । गिरीजाप्रसाद कोइरालासँग बसेर राजनीति गरेका र कोइरालको टेक्निक जानेका सिटौला पनि चानचुने खेलाडी होइनन् । थापाले छोडेपछि सिटौला भने अन्यौलमा पर्ने चिन्तामा छन् । समाचारस्रोतका अनुसार थापा आगामी महाधिवेशनमा सिटौलालाई छोडेर अन्य समूहमा लाग्ने सोचमा छन् ।
सिटौला सभापति, थापा महामन्त्री र उमाकान्त चौधरी कोषाध्यक्ष उठेका थिए । शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाउन सिटौला समूहले अन्तिममा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थियो । सिटौलाले आफू सभापति हारेर दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धामा जान नसकेपछि देउवालाई सघाएका थिए । पहिलो चरणमा देउवा, रामचन्द्र पौडेल र सिटौलाबीच सभापतिमा प्रतिस्पर्धा थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस् !
देउवाको विरोधमा किन बोल्दैनन् गगन ?
थापा पार्टीभित्र लोकप्रिय यूवा नेताका रुपमा परिचित छन् । उनी जुन समूहमा गएपनि महाधिवेशन जित्नका लागि त्यो निर्णायक हुनेछ । त्यसैले पनि गगनलाई लिन जो पनि तयार हुन्छन् । उनको पक्षमा एउटा समूह छ ।
उनले नामकै आधारमा पनि भोट ल्याउने गरेका छन् । उनी भाषणमात्र गर्छन् जनताको काम गर्दैनन् भन्ने आरोप लागेको छ । उनलाई बुझ्नेहरु उनी जुनसुकै जिल्ला गएपनि बेलुका बस्नुपरे अर्को जिल्लामा गएर बस्छन् भन्ने गरेका छन् । नेता, कार्यकर्ता र जनताले दुःख दिने गर्छन् भनेर उनी रातारात भाग्ने गरेको उनलाई बुझेकाहरु बताउँछन् ।